Warbaahinta dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka, Itoobiya iyo weliba kuwa Caalamiga oo Si weyn Wax uga qoray Dhismaha Dekedda Berbera
Saturday October 13, 2018 - 19:46:24 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(XogreebnewsWarbaahinta dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka iyo Warbaahinta dalka Itoobiya iyo weliba kuwa caalamiga ah ayaa aad u qaadaa dhigay munaasibadii madaxtooyada Somaliland loogu qabtay dhagax dhigga balaadhinta iyo casriyaynta dekedda Berbera.
Warbaahintan ayaa bogagooda hore waxa ay ku daabaceen shalay warbixino ay ka diyaariyeen munaasibadan oo ay ka qayb galeen Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda shirkada DP world Sultaan Axmed Bin Suleyman.
Laba ka mid ah warbaahinta ugu magaca dheer Itoobiya ee ku hadla afka dawladda Itoobiya ayaa warbixino shilis ka diyaariyay munaasibadan loo qabtay dhagax dhiga balaadhinta iyo casriyaynta dekedda Berbera.
Warbaahinta Fana ee ay leedahay dawladda Itoobiya ayaa baahisay warbixin ay kaga hadashay munaasibadii lagu qabtay madaxtooyada Somaliland ee
Hargeysa. Fana waxa ay warbixinteeda ciwaan uga dhigtay hadal ay ka soo xigatay Madaxweynaha Somaliland oo ahaa "Dekedda Berbera waa u muhiim sii xoojinta xidhiidh adag oo dhexmara Itoobiya iyo Somaliland.”
Warbaahinta Fana waxay warbixinteeda ku bilowday "Dhismaha shaqada ee horumarinta dekedda Berbera ee Somaliland ayaa lagu furay munaasibad gaar ah oo loo sameeyay xafladaas, waxaana ka qayb galay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxa shirkadda DP world Sultaan Axmed Bin Suleyman.
Fana waxay sheegtay in maalgashiga dekedda Berbera ay kala leeyihiin DP world, Somaliland iyo Itoobiya "Dp world waxay leedahay 51% ka mid ah saamiga dekedda Berbera, halka ay Itoobiya leedahay 19%, iyadoo inta hadhayna [30%] ay leedahay Somaliland. Wejiga koowaad wuxuu ka koobanyahay dhismaha 400 oo mitir oo ah balaadhinta dekedda Berbera si ay u abuurto marin cusub oo ganacsiga gobalka ah.” Ayay tidhi warbixinta Fana.
Wargeyska ku hadla afka dawladda Itoobiya ee The Ethiopian herald, ayaa shalay boggiisa hore ku daabacay warbixin ku saabsan balaadhinta dekedda Bebera ee Somaliland. Wargeyska oo warka koowaad u qaatay Raysalwasaaraha Talyaaniga oo Addis Ababa yimid, ayaa warka labaad wuxuu ka dhigay dekedda Berbera, waxaanu ciwaan uga dhigay "Marinnada badda ee ay Itoobiya isku doorsan kartaa waa ay sii kordhayaan.”
Wargeysku, wuxuu sheegay in Madaxwenaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu munaasibadaas lagu qabtay madaxtooyada ka sheegay in horumarinta iyo casriyaynta dekedda Berbera ay Itoobiya siinayso fursad ah inay hesho dekedo kala duwan.
Marka laga tago dalka Itoobiya warbaahinta dalalka Carabta ayaa aad uga faalooday horumarinta iyo balaadhinta dekedda Berbera.
Warbaahinta Arabian business ee ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo gnacsiga ee wadamada Carabta, ayaa warbixinteeda waxay ay nuxur ahaan ciwaan uga dhigtay DP world oo shaqada suuqa xorta ah iyo balaadhinta dekedda ka bilowday Somalliland, "DP world waxay bilowday horumarinta dekedda Berbera ee Jamhuuriaydda Somaliland.” Waxa hadalkan yidhi Sultaan oo ah agaasimaha DP world iyadoo warbixintu intaas ku dartay "DP world waxay ku dhawaaqday dhismaha shaqada dekedda Berbera, waxaana furay Madaxweynaha Somaliland iyadoo uu goob jog ahaa madaxa DP world.”
Arabian bussines waxay sheegtay in dekedda Berbera u adeegi doonto dalalka gobalka ee aan dekedaha lahayn sida Itoobiya oo ay ku leh saamiga Berbera 19%.
Wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa iyaduna warbixin ay ka diyaarisay waxay ciwaan uga dhigtay "DP world oo bilowday horumarinta dekedda Berbera”, waxaanay WAM warbixinteeda iyadu dheeraysiisay wakaaladaha kale inay si toos ah u adeegsatay magaca Jamhuuriyadda Somaliland, waxaanay warbixintu tidhi "Dhismaha horumarinta dekedda Berbera ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku bilaabantay munaasibad gaar ah oo dhagax dhigis ah. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo agaasimaha DP world Sultaan Axmed bin Sulayman ayaa ku dhawaaqday wejiga hore ee shaqada iyagoo uga mahadceliyay masuuliyiinta dawladda iyo saaxiibada kale taageeradooda bilowga cahdiga cusub ee kobacaha dhaqaalaha dalka.”
Waxa ay WAM soo xigatay hadaladii ay munaasibadda ka jeediyeen Madaxweyne Biixi iyo agaasimaha DP world, waxaanay sheegtay in sh irkadda Shafa Al Nahda ee ku guulaysatay qandaraaska balaadhinta dekedda Berbera halkaas lagu gudoonsiiyay shahaadada qandaraaska balaadhinta dekedda Berbera.
Wargeyska Gulf News, oo ah jariirad ka soo baxda dalka Imaaraadka Carabta ayaa isna baahiyay warbixin dheer oo uu ka qoray dhagax dhigga balaadhinta dekedda Berbera. Sidoo kale wargeyska The National ee Imaaraadka Carabta laga akhristo ayaa isna baahiyay warbixintan oo kale.
Warbaahinta Saudi Gazette oo ah warbaahin Sucuudiyaan ah ayaa iyaduna waxay diyaarisay warbixin ku saabsan dekedda Berbera iyo balaadhinteeda, waxaanay sheegtay in DP world ku dhawaaqday in si rasmi ah loo bilaabayo wejiga koowaad ee balaadhinta dekedda Berbera.
Warbaahinta dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna qoray warbixino kala duwan. BBC iyo Reuters ayaa ka mid ah warbaaintaas.
Warbaahinta Reuters, ayaa baahisay warbixin ay ciwaan uga dhigtay "DP world oo ku dhawaaqday balaadhinta dekedda Somaliland” Reuters, waxay ku bilowday "Shirkada DP world ee uu saldhigeedu yahay Dubai ayaa ku dhawaaqday $ 101 million dollar mashruuc ah oo lagu balaadhinta dekedda Somaliland.”
Waxay Reuters sheegtay in DP world ay maalgelinayso dekedda Berbera oo ah dalka Jamhuuriaydda Somaliland oo xoriyadiisa Soomaaliya kala soo noqday sanadkii 1991 balse aanay weli ciddi aqoonsan.
Wakaaladda wararka ee Reuters, waxay intaas raacisay in dekedda Berbera hadda u muuqato inay is balaadhinayso oo ay ka gudbayso dhoofka xoolaha iyo cuntooyinka ka soo degi jiray, waxaanay tidhi "Dekedda Berbera waxay bariga dhexe u dhoofisaa Geela waxaana ka soo dega cuntooyin iyo alaabooyin kale, laakiin Somaliland waxay ku rajo weyntahay inay siiso adeegyo kale jaarkeeda Itoobiya oo ah o ah dal aan deked lahayn oo ay ku noolyihiin 100 milliin oo ruux waxaanu ganacsigeedu ku xidhanyahay Djibouti.
DP world waxay sheegtay in wejiga koowaad ee balaadhinta dekedda Berbera uu ka koobanyahay dhismaha 400 oo mitir iyo horumarinta suuqa xorta ah iyadoo adeegsanaysa shirkadda Imaaraadka ee Shafa Al Nahda.
Reuters oo soo xiganaysa hadal uu Madaxweyne Biixi saxaafadda ajaanibka ah siiyay waxay tidhi "Maalgashiga Berbera iyo balaadhinteedy waa faa’iido weyn oo Somaliland ku horumarinayso dhaqaalaheeda. Waxaanu ka fikiraynaa inaanu la tartano dekedaha kale ee gobalka.” Ayuu yidhi Muuse Biixi.
Madaxa DP world Sultaan ayaa isna yidhi in dekedda Berbera u adeegi doonto dhaqaalah hore u socda ee Itoobiya iyo suuqeeda xaamiga ku socda.
Wakaaladda Reuters waxay soo hadal qaaday sida ay dawladda Soomaaliyga uga hortimid in dekedda Berbera la baadhiyo oo maalgelin lagu sameeyo, laakiin Madaxweyne Biixi ayaa ku dooday in heshiisyada lala galayo hay’adaha ama shirkadaha noocan ahi ay wax weyn ka tarayaan ictiraafka, "Sababtoo ah markii ay DP world timid Berbera, waxa soo jeedsaday dareenka wadamo kale iyo shirkado waaweyn oo kale sababtoo ah badankoodu waxay ka fikirayeen inaan Somaliland la aqoonsanayn waxaanay iska indho tireen nabadda iyo degenaanshaha Somaliland. DP world waa shirkad weyn oo caalami ah oo ku dhiiratay inay Somaliland timaado, waxaanan rajaynayaa in shirkado kale oo waaweyn oo qaarad kasta ka socdaa ay ku dayan doonaan oo ay iman doonaan Somaliland.”
BBC, qaybteeda dunida la hadasha ayaa iyaduna diyaarisay warbixin dheer oo ku saabsan casriyaynta iyo balaadhinta dekedda Berbera, waxaanay BBC soo xigatay hadalo uu u sheegay madaxa DP world Sultan. BBC waxay sheegtay in DP world aaminsantahay in aqoonsi la’aanta Somaliland aanay dhibaato u gaysanayn maalgashiga ay ku sameeyeen Berbera, "Wax dhibaato sharci ah ma keenayso, sababtoo ah arrintani waa arrimo dhaqaale, waxaanay qayb ka tahay shaqo abuurka.” Ayuu yidhi Sultan, waxaanu intaas raaciyay inaanay DP world mar dambe ku noqonayn Djibouti laakiin ay culayska saarayso dekedda Berbera.